Khadadka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah ee budada ah - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Bacriminta dabiiciga ah ee budada ah ayaa badanaa loo isticmaalaa si loo hagaajiyo carrada loona siiyo nafaqooyin koritaanka dalagga. Waxay sidoo kale si dhakhso leh u burburi karaan markay galaan ciidda, iyagoo si dhakhso leh u sii daaya nafaqooyinka. Sababtoo ah bacriminta adag ee budada ah ayaa lagu nuugaa si tartiib tartiib ah, bacriminta dabiiciga ah ee budada ah ayaa lagu keydiyaa in ka badan inta dareere ah Bacriminta dabiiciga ah. Adeegsiga bacriminta dabiiciga waxay si weyn hoos ugu dhigtay waxyeelada soo gaadhay dhirta lafteeda iyo deegaanka carrada.
Bacriminta dabiiciga ah waxay siisaa cilad dabiici ah ciidda, sidaas darteed waxay dhirta u siisaa nafaqooyinka ay u baahan yihiin si ay uga caawiso dhismaha nidaamyada ciidda caafimaadka leh, halkii ay ka baabi'in lahaayeen. Bacriminta dabiiciga ah ayaa markaa ka kooban fursado ganacsi oo aad u ballaaran. Xaddidaaddaha tartiib-tartiibka ah iyo mamnuucidda isticmaalka bacriminta dalal badan iyo waaxyaha ay khuseyso, soo saarista bacriminta dabiiciga ah waxay noqon doontaa fursad ganacsi oo weyn.
Wax walboo cayriin oo dabiici ah ayaa lagu qasi karaa compost-ga dabiiciga ah. Xaqiiqdii, compost-ka ayaa la jajabiyaa oo la baaraa si uu u noqdo bacrimin dabiici ah oo tayo sare leh oo suuq geynaya.
4. Qashinka guriga: qashinka jikada.
Nidaamka loo baahnaa in lagu soo saaro Bacriminta dabiiciga ah ee budada ah sida budada roodhida neem, budada kookaha, budada qolofta lo'da, budada digada lo'da oo la qalajiyey, iwm.
Khadka wax soo saarka ee bacriminta budada ah wuxuu leeyahay tiknoolajiyad fudud, kharash yar oo qalabka maalgashiga ah, iyo hawlgal fudud.
Nidaamka wax soo saarka bacriminta ee budada ah: compost - burburin - shaandho - baako.
Qalabka ceyriinka ee dabiiciga ah waxaa si joogto ah loogu sameeyaa qashin qubka. Waxaa jira dhowr cabbir oo saameynaya compost, oo ah cabirka walxaha, saamiga kaarboon-nitrogen, cabirka biyaha, ogsijiinta iyo heerkulka. Feejignaanta waa in la siiyaa:
1. Ku burburi walxaha yaryar;
2. Saamiga kaarboon-nitrogen ee 25-30: 1 waa xaaladda ugu wanaagsan ee lagu nafaqeynayo wax ku ool ah. Noocyada badan ee agabka soo gala, ayaa ka sii weyn fursadda burburka wax ku oolka ahi yahay in la ilaaliyo saamiga C: N;
3. Qoyaanka ugufiican ee alaabta ceeriin ee compost guud ahaan qiyaastii waa 50% ilaa 60%, iyo Ph waxaa lagu xukumaa 5.0-8.5;
4. Isu soo wada duubida ayaa sii deyn doonta kuleylka meydka compost. Marka maadadu si hufan u jajabto, heerkulku waxyar ayuu ku yaraadaa geedi socodka rogista, ka dibna wuxuu ku noqdaa heerkii hore laba ama saddex saacadood gudahood. Tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka xoogga leh ee qashin-qubka.
Furimaha toosan waxaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo compost. Markaad jajabiso ama aad shiido, walxaha xanniban ee compost-ka waa la jajabin karaa si looga hortago dhibaatooyinka ku jira baakadaha oo saameyn ku leh tayada bacriminta dabiiciga ah
Mashiinka shaandheeyaha shaandhaynta ma aha oo kaliya inuu soo saaro wasakhda, laakiin sidoo kale wuxuu doortaa badeecooyin aan u qalmin, wuxuuna ku qaadaa bacriminta mashiinka shaandhada iyada oo loo sii marinayo suunka xarkaha. Nidaamkani wuxuu ku habboon yahay mashiinnada shaandheeyaha durdurrada leh godad shaandho oo dhexdhexaad ah. Gogosha ayaa lagama maarmaan u ah keydinta, iibinta iyo adeegsiga bacriminta. Sieving waxay hagaajineysaa qaab dhismeedka compost, waxay hagaajineysaa tayada compost, waxayna faa iido badan u leedahay xirmooyinka dambe iyo gaadiidka.
Bacriminta shaandhada leh ayaa loo qaadi doonaa mashiinka baakadaha si loogu ganacsado bacriminta dabiiciga ah ee budada ah oo si toos ah loogu iibin karo miisaan ahaan, sida caadiga ah 25 kiilo halkii kiish ama 50 kiilo halkii kiish oo ah hal baako oo baakidh ah.